Versiondị KDE Ngwa ọhụrụ 20.12.2 dị ugbu a | Site na Linux
Ngwa KDE 20.12.2 Nwelite Nwelite Naanị wepụtara February site na oru KDE. Na mkpokọta, dịka akụkụ nke mmelite nke February, ewepụtara nsụgharị nke mmemme 225, ọba akwụkwọ, na plugins.
Maka ndị na-amachaghị maka ngwa KDE, anyị nwere ike ịgwa gị nke ahụ ndị a bụ usoro nke ngwa na ọba akwụkwọ kwekọrịtara nke ndị obodo KDE haziri, nke a na-ejikarị na sistemụ arụmọrụ Linux, ma ọtụtụ n'ime ngwa ndị a bụ cross-platform ma wepụta ha na onye na-ebupụta ihe nkịtị.
Oge ngwugwu ngwa KDE ọ bụ akụkụ nke ngwanrọ KDE.
Ihe atụ nke egosipụtara na ngwugwu ahụ gụnyere njikwa faili Dolphin, onye na-ekiri akwụkwọ Okular, onye editọ ederede Kate, Arky Konsole terminal emulator file tool among other.
1 KDE Ngwa 20.12.2 Main New Features
1.1 Nweta Ngwa KDE 20.12.2
KDE Ngwa 20.12.2 Main New Features
Na mmelite ohuru a nke KDE Ngwa 20.12.2 etinyere ngwa ọhụrụ akpọrọ "Kongress" na nke esịne ke version ya 1.0. Kongress bụ ezubere isonye ndị bịara ọgbakọỌfọn, usoro ihe omume na-enye gị ohere ilele kalenda ọgbakọ na ịbịbịa nleta na akụkọ gbasara mmasị, na mgbakwunye na nke ahụ maka ndị ọrụ gam akporo ha nwekwara ike ịnwale mkpokọta abalị site na ebe nchekwa KDE F-Droid.
Ihe ohuru ohuru nke eweputara bu na a mwepụta nke usoro njikwa ọrụ "Calligra Plan 3.3", nke na-enye ohere ịhazi mmezu nke ọrụ, ịchọpụta ịdabere n'etiti ọrụ a rụrụ, ịhazi oge igbu ya, ịchọọ ọnọdụ nke ọkwa dị iche iche nke mmepe yana ijikwa oke akụ mgbe ị na-emepe nnukwu ọrụ.
Mgbanwe ndị bụ isi dị na nsụgharị ọhụrụ ahụ metụtara mmelite nke mgbasa ozi mbipụta, dịka ọmụmaatụ, ugbu a ị nwere ike ibipụta data kwekọrọ na oge ụfọdụ, yana ịpịa nrụpụta na ibe ma ọ bụ karịa.
N'aka nke ọzọ, a na-ekwusi ike na onye ahịa ahụ XMPP Kaidan 0.7 gbakwunyere ikike izipu faịlụ na Ọnọdụ Drag & DropNa mgbakwunye na oge enwere nkwado iji nweta ozi gbasara ngwa ahụ na sistemụ arụmọrụ nke ndị ọrụ na listi ịkpọtụrụ.
Gbakwunye Mgbanwe + Tinye nchikota ka ịtinye a akara ezumike mgbe composing a ozi. Na nsụgharị na-esote, a na-atụ anya nkwado maka ntinye ntinye ederede na mmekọrịta akụkọ ihe mere eme.
Na mgbakwunye, ndị ahịa Matrix Neochat emelitere na nsụgharị 1.0.1 nke a na-edozi nsogbu dị iche iche na mbipụta nke mbipụta, na-egosi avatar na ịchekwa onyonyo.
Ọzọkwa n'akụkụ mmezi, na ọkwa nke ụdị ọhụrụ nke KDE Ngwa 20.12.2 akpọrọ yae doziri ahụhụ na njikwa faili Ark nke kpatara ọdịda mgbe emechiri windo mgbe ị na-ebu faịlụ TAR.
Na-ofu okuku mgbe exiting niile na taabụ na Konsole ọnụ emulator.
Nke mgbanwe ndị ọzọ nke na-esite na ụdị ọhụrụ nke KDE Ngwa 20.12.2:
Onye njikwa faili Dolphin na-enye ngụkọta ndekọ ndekọ ndekọ ziri ezi maka ngalaba FUSE na sistemụ faịlụ netwọ.
Na nchịkọta akụkọ nchịkọta hex, Okteta 0.26.5 mere ka nhọrọ ụcha dị mfe ma gbakwunye otu nhọrọ iji gbanyụọ ọkụ cursor.
E tinyela nhọrọ nke akwụkwọ ọkọwa okwu na ntọala ngwa ngwa Kiten Japanese.
N'ime usoro ihe nlere nke umbrello UML, emebiri mgbe ị na-achọ wijetị na eserese.
Nweta Ngwa KDE 20.12.2
Maka ndị nwere mmasị ịnwe ike inweta ụdị KDE Ngwa 20.12.2 a, ha kwesịrị ịma na ọ ga-abịa. na-eso Linux nkesa nke na-eji KDE.
N'etinyekwu aha, enwere m ike ịgbakwunye na ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya ma ọ bụ chọọ ịmata etu esi anwale ụdị beta a, ị nwere ike gaa na njikọ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Versiondị KDE Ngwa ọhụrụ 20.12.2 dị ugbu a
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Audacious 4.1